Ngokubanzi -Idrafti ekwi-Intanethi | I-Creativos ezikwi-Intanethi (Iphepha 10)
Ukuxhawulana okuyingozi kubhayisikile
Ubugcisa basezidolophini esinokuthi sibubone ezitalatweni zethu busivumela ukuba sifikelele kwigrafiti efana naleyo yenziwe ngumzobi wegrafiti bikismo
Iimpawu ezili-10 ezinkulu ezitshintshe uyilo lwelogo ngo-2014
U-2014 ibingunyaka apho iimveliso ezinje ngePayPal okanye iBarcadi zitshintshe i-logo yazo kwinto yangoku kwindlela yoyilo
I-100 yezifundo ezinomdla kakhulu zabaqulunqi (II)
Ukudityaniswa kwezifundo zevidiyo ezili-100 zabaqulunqi begraphic, eziveliswe kwi-Creativos ezikwi-Intanethi.
I-100 yezifundo zevidiyo ezinomdla kakhulu kubayili (I)
Ukudityaniswa kwezifundo zevidiyo ezili-100 ezibalulekileyo ezivela kwi-Creativos kwi-Intanethi awukaziboni? Ingaba ulunde ntoni?
Imifanekiso eqingqiweyo enobunyani beKazuhiro Tsuji
U-Kazuhiro Tsuji kwimifanekiso yakhe eqingqiweyo ebonakalayo u-Salvador Dalí kunye nabanye abantu abadumileyo
Izilo zezodiac ezicingelwa nguDamon Hellandbrand
UDamon Hellandbrand ucinge kwaye wabonisa iimpawu ezili-12 ezimangalisayo zezodiac ezinokukugcina uphaphile
Isifundo sevidiyo: Yila eyakho into ehlekisayo yokuhlekisa
Kule vidiyo ilandelayo siza kubona ukuba singayila njani into yokuhlekisa ngeAdobe Photoshop kunye neziphumo zasemva kwayo.
Ukuhlekisa ngoPopayi: Indlela entsha yokubonisa umsebenzi wethu
Ngaba uyazi oopopayi abahlekisayo? Fumana ukuba zinjani kwaye ungazisebenzisa njani kwiiprojekthi zoyilo lwakho.
Inkqubo yokwenza umzobo wamalahle nguStefan Harris
Umzobo wamalahle ayingomsebenzi olula, kodwa ukuba ungafumana ubuchule obufanelekileyo unokwenza imisebenzi emangalisayo.
Isifundo seVidiyo: Iindlela zemibala, iPantone kunye neMibala yeCMYK kwiFotohop
Kwimfundo elandelayo yevidiyo siza kuphonononga iindlela zombala kunye nokusetyenziswa kwekhathalogu ye-pantone kwiAdobe Photoshop.
Amanyathelo ama-4 abalulekileyo okwenza umzobo ngombala wedijithali
Ukupeyinta kwidijithali yenye yeendlela eziphambili kwimfashini ngalo mzuzu kwaye kusebenza ukwenza imifanekiso emikhulu
Indawo ye-geodeic eyenziwe kuphela ngephepha lodonga
Amagcisa ahlukeneyo abonisa indlela yokuyila indawo ye-geodeic ngaphandle kwento lodonga okanye ikhadibhodi nakweyiphi na imeko
UKaterina Plotnikova kunye nefoto yakhe emangalisayo kunye nezilwanyana zasendle
Ingxelo yemifanekiso yabantu enezilwanyana zasendle ngumfoti uKaterina Plotnikova's. Kuyamangalisa.
Ipakethe yasimahla yeVintage yeKrisimesi
Ukuqokelelwa simahla kweeVenkile zekrisimesi zabayili bemizobo kubandakanya iiposta, iiflaya, iibheji kunye nemifaki
Yeyiphi indawo eku-intanethi ebhetele ukubonisa ipotifoliyo yakho, iBehance okanye iDribbble?
I-Behance okanye i-Dribbble zezona ndlela zimbini zibalaseleyo zokubonisa iphothifoliyo yakho ekwi-intanethi kunye nokufikelela kubathengi abaninzi
Umfanekiso we-digital VS umfanekiso we-analog
Yintoni umahluko phakathi komfanekiso wedijithali kunye nomfanekiso we-analog? Kutheni le nto imodareyitha yokuqala ithandwa kangaka?
Umbuzo omkhulu: Yintoni umfanekiso?
Wakhe wazibuza ukuba yintoni umfanekiso kwaye ufikelela njani kwingqondo yethu? Uya kumangaliswa kukwazi ukufana phakathi kwamehlo kunye nekhamera.
Imizobo ye-3D ye-Riusuke Fukahori ye-XNUMXD
URiusuke Fukahori uvelise ubuchule obungummangaliso bokwenza i-3D igolide yegolide esebenzisa i-resin egalelweyo
Isifundo seVidiyo: Iziphumo zeGlitch
Isifundo sevidiyo sokufunda indlela yokufaka isiphumo seDatha glitch kwisicelo seAdobe Photoshop ngendlela elula nekhawulezayo.
Isifundo seVidiyo: Iziphumo zeLiso leentlanzi kwiFotohop
Isifundo sevidiyo sokufunda indlela yokufaka ngokulula isiphumo seFisheye kwiAdobe Photoshop ngaphandle kwesidingo sePlagi okanye ezongeziweyo.
Isifundo sevidiyo: Isiphumo seAdobe Photoshop 3D
Isifundo sevidiyo sokufunda ukuba ungasisebenzisa njani isiphumo se-3D kubume bethu ngendlela elula nesebenzayo ngokusebenzisa iAdobe Photoshop.
Isifundo seVidiyo: oopopayi bekhephu kwiFotohop
Isifundo sevidiyo yokufunda indlela yokwenza oopopayi besiqhwithi kwiAdobe Photoshop ngendlela elula nesebenzayo.
Iikhalenda zoBugcisa zaSimahla zika-2015
Ukukhethwa simahla kweekhalenda zoyilo kunye nokuhlelwa konyaka ozayo ka-2015.
Imifanekiso yentengiso: Inkqubo yoyilo inyathelo ngenyathelo
Sijongana njani nomsebenzi wethu wemihla ngemihla ukuze sisebenze? Inkqubo yokuyila ilandelwa njani yingcali?
Ndidinga icwecwe lemizobo. Ndothenga eyiphi?
Amacwecwe emizobo sesinye sezixhobo eziyimfuneko kubayili begraphic kwaye ukuba sijonga enye, uphawu lweWacom lwenza ezona zibalaseleyo
Ukufumanisa izinto eziyilayo!
Sifumene izinto ezili-14 kunye nenethiwekhi yoluntu ye-Instagram. Izinto ezili-14 ezahluke ngokupheleleyo eziya kuhlaziya ubuchule bakho kwimizuzwana embalwa.
+ Izixhobo zemizobo engama-20 zeshishini lakho
Ukudityaniswa kwezixhobo ezibonisa simahla ezingaphezulu kwamashumi amabini kulo naluphi na uhlobo lweshishini.
Imigaqo esisiseko eyi-8: IiABC zoyilo loMzobo
Imithetho esi-8 esisiseko ekufuneka umyili ngamnye ayithathele ingqalelo xa esebenza okanye esenza nayiphi na iprojekthi.
I-Scribble Pen ikuvumela ukuba uzobe ngemibala ezizigidi ezili-16
I-Scribble Pen yipensile eyamkela imibala yokwenyani ngenzwa ukuze iphinde itsalwe ephepheni
Ukupeyinta imvula ngelaphu nguKohn, Djukaric kunye noImre Toth
Imvula yenye yeemeko zemozulu ezivuselele amagcisa athile afana nala mathathu siqokelele kule post
Ungaziphucula njani izakhono zoyilo lwegraphic
Ndingabuphucula njani ubuchule bam bokuyila imifanekiso? Landela olu luhlu lweengcebiso kwaye uye emsebenzini.
Ubuntununtunu bokuchwetheza: Funda ukumamela umbalisi osuka emva koonobumba
Yintoni ubuntununtunu bohlobo? Kutheni le nto kubaluleke kangaka ukuba uyithathele ingqalelo njengomyili? Singayiphucula njani?
Ukufota: Iimpazamo ezinengqiqo kunye neqhelekileyo
Ukudityaniswa kweyona mpazamo inokubakho kwihlabathi lokufota.
Iingcamango zobuchule kunye nezingaqhelekanga: Imisebenzi ongazange uyiphuphe
Ingqokelela yezona zimvo zibambekayo nezingaqhelekanga zeshishini onokuthi wakhe wazicinga.
Imifanekiso kaLili Chin 'yeZinja zeHlabathi'
U-Lili Chin umele uthotho lwemizekelo yazo zonke iintlobo ze-canine emhlabeni
Ipakethe yamakhadi oshishino asimahla ayi-100
Ipakethe yasimahla yeetemplate zamakhadi oshishino ali-100 kwifomathi yePSD kwaye iyahlelwa.
Ngaba uyazazi iindawo ezenza umfana? Funda i-anatomy ye-typographic ukuba ufuna ukuba nguchwephesha olungileyo.
Ukudityaniswa kwemanyuwali ngeSpanish kuzo zonke iinguqulelo zecandelo leCoreldraw.
Yintoni ekufuneka siyithathele ingqalelo xa sisenza ipotifoliyo yethu kunye nokuzazisa kwezinye iinkampani?
Iintsapho ezisisiseko zokuchwetheza
Ulwahlulo olusisiseko lweentsapho ezichwetheziweyo ekufuneka eyazi wonke umyili kunye nomzobi.
Iindlela zokuyila, indlela yokuvelisa izimvo
Iindlela zobugcisa zokuvelisa izimvo kwintengiso. Ukulawula ingcinga phakathi kokungazi kunye nokuqonda ukufikelela kwiziphumo zokuqala.
I-Redbubble, iwebhusayithi ukufumana ingeniso eyongezelelweyo njengomyili
I-Redbubble izisa ithuba lokuba abayili bafumane umvuzo ongezelelweyo wenyanga. Awuyi kuba sisityebi kodwa kuhlala kulungile ukuba ukwazi ukufumana abathengi
Iikholaji ze surreal zikaLuke Robson
Iikholaji ze-surreal zomculi uLuka Robson yimisebenzi eyothusayo kukusetyenziswa kwemibala eqaqambileyo kunye nomxube wezinto ezahlukeneyo zeediliya.
Isisiseko sabafoti: Shutter, isantya se shutter, ukuvula kunye f- #
Yenziwe ntoni ikhamera yethu? Yintoni i-shutter kunye ne-diaphragm kwaye benza ntoni?
Ngaba ungumntu odala izinto?
Umntu oyilayo ngumntu osoloko ecinga ngendlela eyahlukileyo, ongenamkhethe kwaye onebhokisi yokucinga engenamda.
Imizobo eli-10 eliqhelekileyo eliya kukwenza ukrothe
Ukudityaniswa kwemizobo yeklasikhi eyakhiwe kuhlobo oloyikisayo oluphawule ngaphambi nasemva kwihlabathi lobugcisa.
Isifundo sevidiyo: I-Loomax / isiphumo seHollywood kwigumbi lokukhanya
Isifundo sevidiyo se-Lightroom esiya kuthi sifunde ukusebenzisa isiphumo seLoomax kwizincoko zethu ngendlela elula neyobungcali.
Izixhobo zobuchule bokufota: Zeziphi izinto ezifunekayo endizifunayo? (II)
Zeziphi izinto okanye izixhobo endizifunayo ukuthatha ifoto esemgangathweni? Yintoni izixhobo zobuchule bokufota?
Yeyona mifanekiso mi-8 imangalisayo embalini
Ukudityaniswa kwemifanekiso esibhozo eyindumasi kwimbali yokufota engakhange ifumane ngcaciso ukuza kuthi ga kulo mhla.
Imifanekiso yeepensile enefuthe likaMonica Lee
UMonica Lee, igcisa laseMalaysia, uzibonisa izipho zobugcisa zokuzoba
Imizobo ngumyili wefashoni u-Oscar de la Renta
UOscar de la Renta wayenezakhono zokuzoba ezibalaseleyo njengoko kubonisiwe kule mizobo
Ikhosi yeGumbi lokuKhanyisa Isifundo 5: Iinkcukacha, UkuNcitshiswa kwengxolo kunye nokuGxila
Ikhosi yegumbi lokukhanyisa Isifundo 5: Iinkcukacha zegumbi lokukhanyisa. Ungazilola njani iifoto zethu ngendlela ecacileyo nelula.
Uhlalutyo lwegraphic lweeposta zeentsomi ze-horror cinema (I)
Uhlalutyo lwegraphics lweepowusta ezothusayo ezinembali kwimbali ye cinema.
Iifoto ezingama-20 eziza kutshintsha indlela obubona ngayo ubomi
Ukudityaniswa kweefoto ezingamashumi amabini eziza kutshintsha indlela yakho yokuqonda ubomi, umntu kunye nehlabathi.
Yintoni umbala owenziwe ngombala kunye nendlela yokuwususa?
Umbono wokuphoswa kombala sisiseko kuye nawuphi na umfoti okanye uyilo. Ngaba uyazi ukuba usebenza njani okanye uguqula njani umbala wefoto?
Ipakethi yeGazi leSplatter kwifomathi yePNG
Pakisha ngaphezulu kwe-20 splatters yegazi kunye namabala kwifomathi yePNG efanelekileyo yokusebenza kwiAdobe Photoshop.
Isifundo sika-Antony Gormley ngomzimba womntu kwezi ndlela zingenakwenzeka
Umzimba womntu sisiseko somsebenzi wobugcisa ka-Antony Gormley esikubonisa wona kule posi kwi-Creativos Online
Iimfundiso ezili-100 ezimangalisayo zeHalloween (I)
Ukudityaniswa kwezifundo ezili-100 ezintle zeHalloween ukwenza uyilo olusebenzayo olunobuhle obumnyama, oboyikisayo okanye obubi.
19 Iiflaya zasimahla zeHalloween kunye neeTemplate zePost (PSD)
Ukudityaniswa kweetemplate zasimahla ukwenza iiflaya kunye neeposta zeHalloween.
Isifundo sevidiyo seFotohop: Iinyembezi zegazi (uphawu)
Isifundo sevidiyo sokufunda ukusebenzisa iinyembezi zegazi, imivumbo kunye nokuqaqamba kubalinganiswa bethu kwisicelo se-adobe photoshop.
Iincwadana zasimahla zeAdobe Indesign: CS3, CS4, CS5, CS6 kunye neCC
Ukudityaniswa kweencwadana kwifomathi yePDF nakwiSpanish yeAdobe InDesign, yasimahla.
Amakhadi eshishini ama-5 anoyilo olukhulu olusekwe kwimithi eqingqiweyo
Amakhadi oshishino ayi-5 anemithi njengeyona njongo yawo iphambili xa kusothusa umthengi
Uyilo lweNcwadi: Ukubopha izinto
Ngaba unomdla kumsebenzi wokuyila incwadi? Ukwenza oku, kuya kufuneka uqale ngokwazi izinto ezenza imveliso kunye nomsebenzi wayo.
Pakisha 50 iziphumo ezizodwa zeAdobe emva kweZiphumo
Ipakethi yeziphumo ezingamashumi amahlanu ezizodwa kwisicelo sasimahla seAdobe emva kweZiphumo.
Iifowuni ze-Photoshop ezili-10 kufuneka uzame (I)
Ukukhethwa kweeplagi ezilishumi ezibalulekileyo zeAdobe Photoshop.
Uyilo lomhleli: Iindidi zeenkqubo zeletisi
Kuyilo lomhleli sinako ukuzoba umxholo wethu silandela izakhiwo ezahlukileyo, kubalulekile ukwazi ukuhlelwa kweesistim zophindaphindo.
I-Adobe Emva kweZiphumo CS3, CS4, CS5, CS6 kunye neencwadana zeCC kwiSpanish
Ukudityaniswa kwemanyuwali ye-adobe emva kweziphumo kwiSpanish nakwasimahla.
Ipakethi yePhawu leBrashi yePhotohop (I)
Ipakethi yeMega yeepakethi zebrashi ezintandathu (iibrashi zamehlo, iinwele, amaphiko, amehlo, ulusu ...)
Ukudalwa kwenkqubo ye-lattice: Izinto kunye nemisebenzi
Yenziwe ntoni inkqubo ye-lattice? Ndiyiphuhlisa njani enye ukuze ndisebenze kuyilo lokuhlela?
Ukudityaniswa kwezifundo ezisibhozo zohlobo lomsebenzi wokusebenza kunye nesicelo se-adobe photoshop
Isifundo sevidiyo sokufunda ukusebenza kunye neFotohop ukusebenzisa i-digital makeup ngendlela eyiyo kubalinganiswa bethu.
Isifundo seVidiyo esiHlangeneyo seWercolor kwiAdobe Photoshop
Isifundo sevidiyo esiya kuthi sifunde ukusebenzisa isiphumo se-watercolor esidibeneyo kwiifoto zethu.
INkosi kubugcisa be-Origami nguMculi uEric Joisel
U-Erico Joisel uyinkosi eyaziwayo yobugcisa be-Origami esekwe ephepheni njengeziko layo yonke into
Ikamva lilapha: Esona sinyani sinyani se-3d kwi-Intanethi
Ihlabathi lobuchwepheshe likhula ngesantya esimangalisayo. Ngaba uyazi ukuba sikude kangakanani ukuya kwihlabathi le-3D yoopopayi?
Iwebhusayithi ezili-14 ezikumgangatho ophezulu wokufota
I-14 yemithombo yewebhu yokuvula imifanekiso kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi kunye nemisebenzi
Yintoni umphumo weMoirè?
Ngaba uyazi ukuba yintoni umphumo we-moirè? Fumanisa ukuba ivela njani, ungayiphelisa njani kwaye uyisebenze njani.
Yeyiphi eyona nethiwekhi yemidiya yoluntu yokukhuthaza ubugcisa kunye nokhangelo lwabathengi?
Iinethiwekhi zosasazo zasekuhlaleni zokunyusa ezobugcisa ezinjengeBehance, iDribble okanye i-Instagram, zinokufumana abathengi
Iincwadi ezili-10 ezibalulekileyo kubayili bemizobo
Ukudityaniswa kweencwadi ezilishumi ezifanelekileyo zoyilo lwegraphic kunye neengcali ezinikezelwe kwilizwe lomfanekiso.
Ipakethi yeetemplate ezingama-40 zemida yemfundo kwiPSD
Ukuhlanganiswa kweetemplate zemida engamashumi amane zemfundo kunye nobungcali ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Izixhobo zobuchule bokufota: zeziphi izinto ezifunekayo endizifunayo?
Zeziphi izixhobo zokufota ekufuneka ndinazo ukuba ndifuna ukuzinikela ekufotweni ngendlela eyiyo?
Amandla ombala kuyilo lwe logo
Umbala kuyilo lwe logo lubalulekile kwilogo yokuchaphazela umthengi kunye nemveliso enikiweyo
Iincwadana zasimahla zeAdobe Illustrator: CS3, CS4, CS5, CS6, CC
Ipakethe yeencwadana zasimahla kunye neSpanish yeAdobe Illustrator. Iinguqulelo ze-CS3, CS4, CS5, CS6 kunye neCC.
Iikhosi ezi-3 zasimahla zeAdobe InDesign
Ukudityaniswa kwezifundo ezintathu zasimahla kwi-Intanethi ukusazisa kwihlabathi lobeko kunye nesicelo seAdobe InDesign.
Iifomathi ezili-10 zasimahla zeflaya kwifomathi yePSD
Ukudityaniswa kweetemplate ezilishumi ukwenza iiposta zentengiso kunye neeflaya zeminyhadala, amaqela kunye nokuthengiswa kwemveliso. Yimfuneko kuye nawuphi na umyili.
Ukwenza iimilo ezisisiseko ngeAdobe Illustrator
Namhlanje ndiza kukufundisa ukuba wenze iimilo zejiyometri ezisisiseko kwaye uzisebenzise, ​​ngezixhobo ezinikezelwe kuyo.
Iintsomi ezi-5 zoyilo zoyilo ezinike imisebenzi yazo zijija
Iintsomi ezi-5 zoyilo loyilo abathi ngamanye amaxesha kwimisebenzi yabo bayitshintshe ngokupheleleyo indlela yabo
Iingcebiso zomzekeliso zedijithali ezingama-500, amaqhinga, kunye nobuchule
Ngaba uyayazi le ncwadi iingcebiso ezingama-500, amaqhinga kunye nobuchule bomzekeliso wedijithali? Ukuba uza kungena kwihlabathi lobugcisa bemizobo kufuneka.
Ungazikhusela njani iifoto zam ngelungelo lokushicilela? (I)
Ukukhusela umsebenzi wethu kubalulekile njengokuwenza kakuhle. Ke ngoko, ukuba ungumculi obonakalayo, kuya kubaluleka kuwe ukuba wazi umthetho welungelo lokushicilela.
9 izixhobo ezizezinye zokutshintsha iiFireworks zeAdobe
Ukuphucula i-logo yinjongo yeenkampani ezithile ezifuna ukuqhubekeka ziguquka
I-Illustrator yinkqubo yokudweba i-vector ye-Adobe esele ikhona ngaphezulu kweminyaka engama-25, isalathiso esicacileyo kumzi-mveliso uyilo.
Ubugcisa bePhepha: Imigaqo yoYilo lwePosta
Umzobi usifundisa ngokusebenzisa ubugcisa bephepha imigaqo-siseko yeeposta
Ubugcisa beekhasethi ezitywiniweyo
Uyilo lwe-Retro lweekhasethi zekhasethi lungafana nethuba lokufumana umbono othile kwiVintage
Umdibanisi woMyili uza kuguqula uyilo lwegraphic kwiMac
Umdibanisi woMyili yinkqubo entsha yoyilo lwegraphic enokuthi ihambisane neAdobe Illustrator uqobo
Umxholo omtsha woyilo ngokutsha lwe logo yohlobo lwe Adidas
Uphawu lweAdidas lolunye lwezona zithandwa kakhulu kwaye ilogo yalo iyaziwa kakuhle ngabo bonke ngemigca yayo emithathu ediagonal
Funda ukusebenzisa ulungelelwaniso lwe polar
Sebenzisa icebo lokucoca ulwelo lwe-polar ukwenza imifanekiso ye-surreal ngefotohop
Sebenzisa isixhobo sePen kwiAdobe Photoshop
Namhlanje siza kuqhubeka nokuthetha ngezixhobo zokudweba zeAdobe Photoshop, kwaye ngakumbi malunga neenketho eziphambili zesixhobo sePen.
Funda ngendlela olona lwimi lusetyenziswayo ehlabathini ukurekhoda ubukho balo ukuba yenziwe njani: Iphepha.
Imithetho emi-5 yegolide yathethwa ziingcali zegcisa kwicandelo lokuchwetheza
Namhlanje ndiza kubonisa isicelo, ukuba ungaqala kanjani ukusebenza nayo.
Izixhobo ezi-4 zokwenza eyakho i-typography kwaye ebonisa ukuba amandla okwenza iifonti atshintsha njani
Namhlanje ndikuzisela okokugqibela kwezifundo zevidiyo endizinikezela kwizixhobo zokukhetha, sisixhobo esisizisayo namhlanje, zombini ziyancedisana nabanye, kwaye zahlukile indlela yokwenza. Namhlanje ndikuzisela iposi, Uyisebenzisa njani imo yeMaski ekhawulezileyo kwiFotohop.
Ingqondo engenakuthelekiswa nemifanekiso eqingqiweyo kaLi Hongbo
U-Li Hongbo ngumzobi owaziyo, onesibophelelo esikhethekileyo sephepha kunye nokubuyisa imifanekiso eqingqiweyo yamaphepha
Amakhadi oshishino amatsha angama-20 azo zonke iintlobo zeengcali kunye neenkampani
Amagcisa ahluka-hlukeneyo azisa ezona makhadi zeshishini zoqobo kunye nezobuchule
Imizekelo emi-5 yamagcisa ayilo loyilo
Uyilo lwemihombiso bubugcisa obudala-khulu obuhleli nathi ixesha elide. Amagcisa amahlanu e-avant-garde abonisa indlela ezizodwa ngayo zoyilo
Ungazisebenzisa njani izixhobo zokukhetha kwiFotohop
Namhlanje siza kufunda ngendlela yokusebenzisa ezona zixhobo ziqhelekileyo zoKhetho kwiFotohop. Oku kuyakunceda uzilawule ngcono kwinkqubo.
4 imizekelo ekhethekileyo yobugcisa beqhekeza
Amagcisa amane anobugcisa beqhekeza njengenye yezakhiwo zawo ezibalulekileyo xa bevakalisa bonke ubuchule babo kolu hlobo lwejometri
Uyenza njani ibhanna ehambayo kwiFotohop ngokulula 2 (isiphelo)
Namhlanje siza kugqibezela isifundo sevidiyo esilula apho senze khona ibhena, kwaye apho sifunde khona ukusebenzisa isixhobo sexesha elifanelekileyo.
Ipakethe yasimahla yemvelaphi yejometri ezingama-20
Iipakethe zasimahla zejometri ezingamashumi amabini okanye imilo enamacala amaninzi egqibeleleyo ukusebenza kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi.
Impelaveki yeCubist: Iitayile ezili-10 eziPhambili (II)
Ukudityaniswa kwee-cubist tutorials zeAdobe Photoshop kunye neAdobe Illustrator. Ngaba ungathanda ukufunda ukusebenza ngombono we cubist?
Impelaveki yeCubist: Iitayile ezili-10 eziPhambili (I)
ICubism: Iiposta ezi-10 ezikhuthazayo
Ukudityaniswa kweepowusta ezilishumi ezikhuthazayo kwisitayile se cubist. Uyilo lwegraphic lukwachukunyiswe lixesha langoku le-avant-garde.
ICubism: Ngubani othe iMathematics yayingengobugcisa?
Wazi ntoni nge cubism? Ifuthe njani kuyilo lwegraphic kunye nobugcisa kamva? Intshayelelo yeyona mbono ishushu ye cubism.
Scribus: Inkqubo yokuma simahla
Ngaba uqhelene nenkqubo yokuma simahla ebizwa ngokuba yiSribus? Akukhe kusemva kwexesha ukuba ulonwabo lulungile, nantsi ndikunika inkqubo kunye nencwadana yokufaka.
Abalinganiswa bakaBruce Timm kwiBatman: Uthotho lweZilwanyana
UBruce Timm wadala uninzi lwabalinganiswa kwelinye lawona manqaku aphambili oopopayi: Batman uthotho lweopopayi
Isifundo sokufunda ukwenza izinto ukusuka ekuqaleni, uzigcine kwikhompyuter yethu kwaye uzisebenzise ngokuzenzekelayo kwinani elikhulu leefayile.
IVidiyo-iTutorial: Uyenza njani ibhena ehamba kwiFotohop ngokulula
Namhlanje kule vidiyo-iTutorial, siza kukufundisa indlela yokwenza kunye nokulungiselela iprojekthi yokwenza ibhena kunye nenkqubo yeAdobe Photoshop.
Isifundo: Dibanisa ubuso kwiapile (ii)
Isifundo seAdobe Photoshop sokufunda ukwenza izinto eziphilayo kunye nokwenza umntu ngendlela eyiyo ukhathalela izinto zokudibanisa ukunika ubunyani.
Isifundo: Dibanisa ubuso kwiapile (i)
20 Iimpawu ezimangalisayo zeSurreal (II)
Ukudityaniswa kwezifundo ezingama-20 ezimangalisayo nezigqibeleleyo zokusebenzela ukusebenza kwi-surreal concept ngokusebenzisa i-photo manipulation.
Ukungaqiniseki: Iiposta zokukhuthaza
Ukuqokelelwa kweepowusta zangoku ze-surrealism, ezigqibeleleyo ukusikhuthaza kwaye siqonde iziseko zobuhle zale ndlela.
20 Iimpawu ezimangalisayo zeSurreal (I)
Ukuvela kwe-canon yobuhle yabasetyhini kwiinkulungwane (II)
Uphengululo lwembali yokuvela kwe-canon yobuhle ngexesha lamashumi amabini ananye eminyaka. Utshintshe njani umxholo wobuhle kule minyaka idlulileyo?
Ulawulo lweMbala: iMetamerism
Yintoni imetamerism? Ungayilwa njani? Ingcinga ebaluleke kakhulu xa kufuneka sinyamekele ulawulo lwemibala kuprinta.
Ipakethi yeSparkle yasimahla yeFotohop
Ipakethe yasimahla ye-50 sparkles kwiPNG kunye nefomathi yeJPG efanelekileyo yokusetyenziswa kwiAdobe Photoshop. Ukusetyenziswa komntu kunye nokuthengisa.
Ukuvela kwe-canon yobuhle besetyhini kwiinkulungwane ezidlulileyo
Ukuhlanganiswa kwemigaqo yobuhle besetyhini kwimbali yehlabathi.Yayinjani, yayiza kuba njani kwaye intle intokazi ngokwembono yobugcisa?
Ukukhethwa kweeplagi ezilungileyo ezili-10 zeempembelelo zangemva (I)
Ukudityaniswa kweeplagi ezilishumi eziyimfuneko ukuze usebenze kwinqanaba lobungcali kunye neAdobe emva kweZiphumo. Ukuba uyili, awunakuphosa.
Imbali yentengiso: Imihla engalibalekiyo (I)
Ukudityaniswa kwamanyathelo abalulekileyo kwimbali yentengiso. Ukusuka kwimvelaphi yayo ukuya ku-1955. Awukayazi ukuba yayiyintoni na intengiso yokuqala?
Isifundo seFotohop: isiphumo sesantya
Isifundo seAdobe Photoshop sokufunda ngendlela yokwenza isantya kwiifoto zethu kwaye sinike iziqendu zethu amandla amakhulu.
Iindlela zokwenza intengiso
Ukudityaniswa kweendlela eziphambili zentengiso. Kusebenza kakhulu ekusaziseni kunxibelelwano lwentengiso.
Ipakethe yeMega: I-5Gb yezixhobo zoyilo lweWINDLELA lewebhu
Ukudityaniswa kwezixhobo ezingaphezulu kwesihlanu sezixhobo zabaqulunqi, ezilungele uyilo lwewebhu kunye nokusebenza kolu hlobo lweprojekthi.
Isifundo seFotohop: Isiphumo seHarris Shutter
Isifundo esibonisa indlela yokufaka isiphumo seHarris Shutter kwizincoko zethu ngokusebenzisa iAdobe Photoshop. Kulula, ngokukhawuleza, kulula.
Iifowusta ezikhuthazayo zasehlotyeni
Ukudityaniswa kweepowusta ezilishumi zasehlotyeni ezifanelekileyo ukwenza iiflaya kunye neepowusta. Khuthazwa ngabo!
Iikhosi ezi-5 zasimahla zoyilo lwegraphic
Ukudityaniswa kwezifundo ezintlanu zasimahla zoyilo lwegraphic. Ngaba uyafuna ukuqala ngezixhobo zoyilo ezaziwa kakhulu? Eli nqaku linomdla kuwe.
Isifundo: Hlanganisa imifanekiso ye-Illustrator kunye ne-Adobe Photoshop Images
Kule tutorial siza kubona indlela yokudibanisa imifanekiso kwi-Adobe Photoshop ukwenza ubume kunye nezinto ze-vector kunye ne-bitmaps.
Iindlela zokuvelisa izimvo (III): Unxibelelwano
Ukudityaniswa kweenkqubo zokuvelisa izimvo ezintsha kunye nokusebenza kubuchule bethu bokuyila.
Isifundo seFotohop: Sebenzisa imifanekiso usetyenziswe kwiWebhu
Isifundo sokufunda ngendlela yokwenza iifoto ezenzelwe i-Intanethi. Siza kujonga useto kwiJPEG, PNG nakwi-GIF.
Iindlela zokuvelisa izimvo (II): Uvavanyo lobuchule
Ukuhlanganiswa kwenkqubo yokucinga esecaleni yokuvelisa izimvo ezintsha kunye nokusebenza kubuchule bethu.
Uyilo olungummangaliso lwama-20 lokupakisha
Ukudityaniswa koyilo lwe-20 yoyilo olwahlukileyo oluvela kumbono wegraphic. I-Pèrfectos ukusikhuthaza kubo.
Iindlela zokuvelisa izimvo (I): Ukucinga ngokuthe gabalala
Funda indlela yokwenza isicatshulwa sokutshiza kwiFotohop
Funda ukwenza isicatshulwa se-aerosol kwi-Photoshop ngendlela elula kunye nazo zonke izixhobo oza kuyidinga. Yenza uyilo lwakho lube nobuchule ngakumbi.
Iibhanki zevidiyo ze-HD (I)
Ukudityaniswa kweebhanki ezintlanu zeevidiyo ezibandakanya HD kunye nomxholo opheleleyo we-HD ngomsebenzi wethu wobungcali.
+ 50 izibonelelo ezisisimahla
Ukudityaniswa kwezixhobo ezingaphezulu kwamashumi amahlanu ezinto ezincinci kubayili bemizobo, kubandakanya iivenkile, iiposta kunye neelogo.
Impelaveki encinci: iimfundiso ezili-10 eziphantsi
Ukudityaniswa kwezifundo ezilishumi zokudala iingoma zesitayile esincinci, ukusuka kwiipowusta ukuya kumaphepha ewebhu okanye iipotifoliyo.
Imigaqo esisiseko: Isikhokelo seGrafikhi yoMzobi (II)
Ukuphononongwa kwemigaqo elishumi esebenzayo yokujongana nokudalwa kwalo naluphi na uhlobo lolwakhiwo. Ngaba uyabazi?
Imigaqo esisiseko: Isikhokelo seGrafikhi yoMzobi (I)
Imizekelo eli-10 emangalisayo yentengiso engaphantsi
Imizekelo elishumi yezindululo zentengiso ezingaphantsi ezibhekisa kwizinto nakwizenzo zesondo ukuphembelela ukuthanda kombukeli.
Iimpazamo ezili-10 ezimangalisayo kumzi mveliso wefilimu
Ukudityaniswa kweempazamo ezilishumi ezimangalisayo kwi-cinema kwiifilimu ezinkulu ekusenokwenzeka ukuba awuzange uziqwalasele.
Ipakethi yeGothic: +50 izibonelelo zefantasy zasimahla kwifomathi yePSD
Ipakethe yeGothic yezixhobo zoyilo lweefayile ezinefomathi yePSD, enokukhutshelwa kunye nezinto ezingaphezulu kwamashumi mahlanu ezinokuhlelwa.
Impelaveki ye-Gothic: Iitayile ezili-10 zeZiphumo eziPhambili zeZifundo
Ukudityaniswa kweshumi simahla kwesimbo seGothic. Ndiyathemba ukuba uyayonwabela!
Ii-Anecdotes, iziqhulo kunye nezinto ezibonisa umdla ezijikeleze umhlaba kuyilo lwegraphic. Kukulungele ukuqala impelaveki kunyawo lwasekunene.
I-StayFocusd ilawula ukwandisa imveliso yakho ngokuthintela iziphazamiso eziqhelekileyo kwi-freelance, ekubeni sisicelo esiluncedo kakhulu kumyili.
Iminqweno yembali malunga ne-psychology yembala kunye nemvelaphi yeentsingiselo ezithile esizinika imibala namhlanje.
Ipakethi yeRetro: Iifayile ezingama-50 kwifomathi yasimahla yePSD
Ukudityaniswa kweefayile ezingama-50 kwisitayile se-Retro .psd ifomathi efanelekileyo kwiiprojekthi zethu okanye ukuba zikhuthazwe ngabo kwaye zihleleke ngokupheleleyo.
Vintage vs. Uhlobo lwe-retro: 15 imizekelo ekhuthazayo
Ukuhlanganiswa kwemisebenzi elishumi elinesihlanu kwisitayela se-retro kunye nesivuno esiza kukukhuthaza xa usebenza kwiipowusta nakwezinye iiprojekthi.
Impelaveki yeRetro: Iitayile ezili-10 zeZiphumo eziPhambili zeZifundo
Ukudityaniswa kwezifundo ezilishumi zendlela ye-retro yazo zonke iintlobo zeeprojekthi: Iipowusta, iibheji, iimephu, iifonti ... Zonwabele!
Izinto ze-Smart kwiFotohop
Isikhokelo sokuQala kwizinto ze-Smart kwi-Photoshop. Ukuphononongwa ngokungaphezulu komqondo wayo, ukusetyenziswa kwayo, ukusebenza ngezinto ezintle kunye neefilitha.
Isifundo: Iindlela ezi-5 zokulola iifoto zethu
Iindlela ezintlanu zonyusa ubukhali beefoto zethu kunye nemontage kwiAdobe Photoshop. Kulula, ngokukhawuleza, ngobungcali.
Isifundo sevidiyo: Isiphumo sephepha eliqwengiweyo kwiAdobe Photoshop + Emva kweZiphumo
Isifundo sevidiyo ukwenza iphepha lekhefu oopopayi ngeAdobe Photoshop kunye neAdobe emva kwesiphumo ngaphandle kwesidingo seefowuni okanye izandiso.
Igridi yesiseko se-InDesign | Isifundo sabayili bemeko yoyilo
Ngaphambi kokuba uqale umsebenzi wobeko kwicandelo loyilo lokuhlela, kufuneka wazi ukuba yintoni InDesign isiseko igridi.
I-10 kufuneka ibe neeapps zabafoti
Ukudityaniswa kwezicelo ezilishumi ezinomdla kakhulu zabafoti abaziingcali kunye nabafundileyo. Iinkqubo zazo zombini i-PC kunye nee-smartphones.
Imizekelo engama-20 yentengiso yoyilo
Ukuhlanganiswa kwemizekelo engamashumi amabini yentengiso yoyilo. Izindululo ezimangalisayo eziyilelwe ukuthimba ingqalelo yethu ngendlela yomlingo.
Iintsomi zencwadi yamahlaya: Uhambo ukusuka ngo-1929 (II)
Ukudityaniswa kwentsomi yencwadi ehlekisayo ukusukela ngo-1929. Inxalenye yesibini yolu qokelelo apho ababhali abanjengoStan Lee noQuino bafumana ingqalelo ekhethekileyo.
Lo ngumbuzo abaninzi bethu abakhe bazibuze wona. Kule posi uza kubona uluvo lomntu malunga nokuba yintoni iCargocollective (i-pros and cons).
Iintsomi zencwadi yamahlaya: Uhambo ukusuka ngo-1929 (I)
Ukuhlanganiswa kwamanani abameli abaziwayo kunye nabaziwayo kwihlabathi le-comics. Ii-Anecdotes kunye nolwazi oluvela kwimicu yamahlaya eyothusa umhlaba.
Ubungcali kuyilo lwegraphic
Ingcali ibalulekile kuwo nawuphi na umsebenzi. Nalu udidi lwamasebe aphambili kuyilo lwegraphic.
Iifoto ezingama-52 ezintle ngaphandle kokusebenzisa i-Photoshop
Ukuhlanganiswa kweefoto ezingama-52 ezintle ngaphandle kokusebenzisa i-Photoshop okanye esinye isicelo sokuphinda ufake iifoto. Kufanelekile ukubona.
Ubhaliso lweVidiyo: Intengiso okhe wafuna ukuyenza
IVideosify sisicelo esikuvumela ukuba wenze iividiyo ze-HD ezinee-aesthetics zentengiso ngendlela eyiyo ngokupheleleyo. Ngaba awuyazi?
Izifundo ezilishumi ezoMangalisayo zoMzekeliso
Ukudityaniswa kwezifundo ezilishumi zasimahla zeAdobe Illustrator ezigqibeleleyo zokufunda ukusebenzisa usetyenziso.
Iipotfoliyo ezilungileyo ezili-10 ezenziwe kwiCargocollective kunye nezimemo ezi-4 zasimahla
Kuya kufuneka wenze iphothifoliyo ekwi-intanethi kwaye awazi ukuba njani. Apha uya kubona iiphothifoliyo ezilungileyo ezili-10 ezenziwe kwiCargollective kwaye unokufumana isimemo sasimahla.
Izinto eziyilayo ekufuneka uzilandele kwi-Instagram yokuphefumlelwa mihla le
Uyazi ukuba i-Instagram ngumthombo obalulekileyo wokukhuthaza, kodwa umtsha kwaye awubazi abantu abakwicandelo. Fumana ukuba ngubani omele alandele kwi-Instagram apha.
Guqula uyilo lwe-InDesign kwi template yeLizwi ngamanyathelo ama-6
Umxhasi wakho kufuneka aguqule isicatshulwa seeleta zakhe: ke, funda indlela yokwenza itemplate yeLizwi kuyilo lwakho kwi-InDesign. Ngokukhawuleza kwaye kulula!
Ndifunda phi kuyilo lwegraphic? Amaziko angama-14 aphezulu eSpain
Ukudityaniswa kwezona ndawo zili-14 zibalaseleyo zokufunda zoyilo lweSpanish Udidi olwenziwe luluntu lwaseyunivesithi yasePatata Brava.
Iingcaphuno ezili-100 zonke igcisa kufuneka zive
Izicatshulwa ezili-100 ezivela kubantu ababalulekileyo kwimbali yendalo iphela. Iyakhuthaza kwaye ilungele nawuphi na umntu onobuchule, kuwo nawuphi na umculi.
Isifundo: Uyilo lohlobo lweTim Burton kwi-AI (3)
Isifundo seAdobe Illustrator yoyilo loonobumba bendlela kaTim Burton ngendlela elula nenomdla kubaqalayo. Inyathelo nenyathelo.
Iingcebiso ezili-13 zokuchwetheza Wonke uMyili kufuneka ayithathele ingqalelo
Zingaphi iintlobo ekufuneka ndizisebenzise kuyilo? Bungakanani ubungakanani? Yeyiphi imiba ekufuneka ndiyinyamekele? Funda apha iingcebiso zokuchwetheza ekufuneka uyazi njengomyili.
I-Spiekermann's Iingcebiso ezi-8 zeTypographic (i-Infographic)
Ukuba ufuna ukuzinikezela kuyilo lwegraphic, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ezi ngcebiso ze-8 zokuchwetheza zinikezwe ngu-Erik Spierkermann, uchwephesha owaziwayo.
Isifundo: Uyilo lohlobo lweTim Burton kwi-AI (2)
Isifundo: Uyilo lohlobo lweTim Burton kwi-AI (1)
Ukukhethwa kwezimemo zomtshato ezingama-20 ezilungileyo
Ukudityaniswa kwezimemo ezilungileyo zomtshato ezingama-20 kulo nyaka kwaye sihlalutya ezona zinto ziphindaphindwayo kuyilo: Zahlule!
Iifoto ezingama-69 kufuneka uzibone ngaphambi kokuba usweleke
Ukuhlanganiswa kweefoto ezingama-69 ezothusayo zembali yoluntu. Iimfazwe, uthando, ukuhambelana, iziganeko zembali ...
Uthungelwano olukhethekileyo ekuhlaleni labayili bemizobo
Uninzi lweenethiwekhi zentlalo zisinceda ukuba sabelane ngomsebenzi wethu, sixatyiswe, sifumane ukugxekwa kunye nokunikwa imisebenzi. Kuphela kuyilo lwegraphic.
Izimbo ezi-5 zoMzekeliso ezaKukhuthaza
Namhlanje sikuzisa ngeendlela ezi-5 ezahlukeneyo zomzekeliso eziza kukukhuthaza: iindlela ezahlukeneyo zokucinga ngombala, ukuzoba, ukuqamba, ukuthimba ...
25 Izilogeni eziphawule ngaphambi nasemva
Ukudityaniswa kwezilogeni eziphawule ngaphambi nasemva kwihlabathi lentengiso kwaye zisebenza njengomzekelo kunye nenkuthazo kubayili abatsha.
Layisha iiphalethi zemibala kwi-Illustrator CS6
Isifundo esichazayo sendlela yokulayisha iiphalethi zombala eziveliswe yiAdobe Kuler kwifom .ase usebenzisa iAdobe Illustrator CS6
25 Iminqweno malunga noyilo lwegraphic
Iminqweno engama-25 malunga nelizwe loyilo lwegraphic, yenza uphononongo oluncinci lwembali kunye nokuzivelela koluqeqesho.
Apha ngezantsi sikhethe iiphothifoliyo ezili-10 ezikwi-Intanethi ezisuka kwi-2014 yoyilo lwewebhu, abaphuhlisi, i-UI kunye ne-UX abayili kunye nezinye iingcali ezifanayo.
Ukukhethwa kwemisebenzi elungileyo yokuthengisa uphawu
Sikhethe imisebenzi yokufaka uphawu kwi-6 ukuze uyibone, uyihlalutye kwaye uphefumlelwe: imivalo, iivenkile zeshizi, patisseries, izazisi zobuqu kunye nokunye.
I-GoAnimate: Yenza iikhathuni ngexesha lokurekhoda
I-GoAnimate yiphepha lewebhu elisinika ithuba lokudala iikhathuni ze-2D kunye noopopayi kwimisebenzi eyahlukeneyo. Uyamazi?
Iimpawu ezingama-25 zangoku zokukukhuthaza
Ukuqonda ubunzima bokuzenza, sikhethe iilogo ezingama-25 zizonke ezenziwe kunyaka ophelileyo ukuze uzibone, ufunde kwaye uzihlalutye.
Ukuyila kwakhona kuyilo loyilo lwewebhu, abayili bemizobo, abenzi bemifanekiso kunye nokunye
Ukuyilwa ngokutsha kwe-17 yayo yonke into eya kukukhuthaza xa uyila kwaye uzenzela eyakho. Zahlule kwaye ufumane umsebenzi ngokuqhubeka kwakhona!
Iincwadi ezili-18 zaBayili beMizobo kunye nabaYili beWebhu
Namhlanje ngumhla wencwadi, kwaye sifuna ukuyenza ngokucebisa uthotho lwezifundo ezinomdla kuwe. Iincwadi ezili-18 zabaqulunqi.
Imifanekiso yobugcisa: Isifundo sokuKhanyisa kwiCandelo II
Isifundo kwezona ndlela zisebenzayo kunye nezikhundla zokukhanyisa kwimifanekiso yobugcisa obuhle okanye ividiyo ye studio.
Ubugcisa bokufota: Icandelo lokufundisa ngezibane
Iimvakalelo ziyinto ebaluleke kakhulu xa usebenza kwihlabathi loyilo. Ubunjineli beKansei kunye noyilo lweemvakalelo ziya kusinceda senze oku.
Isifundo seAdobe Photoshop ukwenza umfanekiso oqingqiweyo kwifoto kunye nomsebenzi wokubhala ngamatye ngendlela elula nefanelekileyo.
Isifundo seFotohop: Icandelo lokuBhala eliTye
Ukudityaniswa kweeplagi ezili-10 ezintle zeAdobe Photoshop anokuthi umyili ngamnye afune ukwazi.
Iindlela ezimfutshane ezinokusetyenziswa kwi-Illustrator yeWindows ne-Mac, iluncedo kakhulu ekufumaneni ukusebenza kakuhle, ubuchule kunye nemveliso.
Iifayile zeKhobhodi eziSebenzayo zeNdlela zeNdawo
Imibala yendlela yoyilo lwegraphic 2014: Imibala yePantone
Imibala yePantone ngexesha leNtwasahlobo ka-2014. Ilungele bonke abayili bazo, ukukhetha eyona indibaniselwano ifanelekileyo kwindalo yethu.
Izifundo ezingama-20 zokufezekisa izakhono zakho ze-Photoshop
Ukubeka ezi tutorials ekusebenzeni kuya kukwenza uzive utyibilika ngakumbi, ungene ngaphakathi kumanyathelo athile, kwaye uphucule ukuphatha kwakho i-Photoshop.
Ingaba yin? Ndiyenza njani? Isikhokelo esifutshane kubaxumi malunga nendlela yokwenza amafutshane (encinci) kuyilo lokwenza umsebenzi olungileyo. Ngena unike uluvo lwakho.
Ukudityaniswa kweyona ndlela imfutshane yokuthatha iifoto kwi-adobe kwiWindows ukukhawulezisa umsebenzi wethu, ukufumana ukusebenza kakuhle kunye nemveliso.
Iimvumba, iilebheli, iibheji kunye neempawu kwisitayile se-retro simahla!
Izixhobo zasimahla zabaqulunqi besitayile se-retro. Ukudityaniswa kwezinto ezili-110 zazo zonke iintlobo zokusebenzela ukwenziwa kweediliya simahla.
Ukucheba iinwele kwi-Photoshop CC: Kulula, kuyakhawuleza kwaye kuyingcali
I-Photoshop tutorial yevidiyo yokwenza ukusika kobuchwephesha ngokuchaneka ngendlela elula.
Isifundo seVidiyo yeFotohop CC: Iziphumo zokudityaniswa, iimaski zomaleko, kunye nokwahluka
Isifundo sevidiyo kwiAdobe Photoshop CC yokufunda ukufunda iMask yeMaleko kunye nesixhobo somahluko.
Iiposta ezili-12 zoBuchule eziya kukuKhuthaza
Sonke kuye kwafuneka siyile ipowusta ngaxa lithile: fumana apha inkuthazo eyimfuneko kunye neepowusta ezili-12 zokuyila ezingayi kukushiya ungakhathali.
Uyenza njani inki kunye nombala wemizobo yethu ngeAdobe Photoshop (icandelo 7)
Ukugqibezela lo mgca wezifundo kwindlela yokwenza i-inki kunye nokufaka imibala kwimizobo yethu ngeAdobe Photoshop, siza kuwugqiba umsebenzi wethu wedijithali.
Ukubaluleka kwenkcazo yoyilo elungileyo (I)
Olu luhlu lwezithuba luyakukunceda ufundise umthengi ukubaluleka kokwenza isikhombisi esifanelekileyo sokuyila ukufumana iziphumo ezilungileyo. Funda kwaye unike uluvo lwakho.
I-Adobe Photoshop inezixhobo ezininzi zokufaka imibala kunye nokufaka imibala kwimifanekiso yethu, kwaye kwesi sifundo siya kufaka uninzi lwazo.
Siza kuqhubeka nesifundo Indlela yokwenza inki kunye nokufaka imibala kwimizobo yethu ngeAdobe Photoshop kwinxalenye yayo yesihlanu, siyi-inki yonke loo mzobo.
Uyenza njani inki kunye nombala wemizobo yethu ngeAdobe Photoshop (icandelo lesi-4)
Inkqubo ye-inki kunye ne-Adobe Photoshop yinto entle kakhulu kwaye imnandi, ngaphakathi kwenkqubo yokusebenza engamanzi kunye nenamandla.
Uyenza njani inki kunye nombala wemizobo yethu ngeAdobe Photoshop (icandelo lesi-3)
Kwinxalenye yangaphambili yale khokelo, sabona indibaniselwano yezixhobo zeFotohop, ukuyinki kwimizobo yethu ngesiphumo sobungcali.
Uyenza njani inki kunye nombala wemizobo yethu ngeAdobe Photoshop (icandelo lesi-2)
Ngoku siza kuqala ukusebenza ngokuthe ngqo kumzobo, ngakumbi ngakumbi, ngaphambi kokuqala ubugcisa bomgca esiya kuwo ...
Uyenza njani inki kunye nombala wemizobo yethu ngeAdobe Photoshop
Ukubakho kokusebenza kwimizobo yethu kunye neAdobe Photoshop yenye yeempawu ezintle zale software. Kule tutorial, uya kufunda ukuba ungayisebenzisa njani.
Isifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop (yokugqibela)
Namhlanje ndikuzisela icandelo lokugqibela lale Tutorial, apho bendikuvumela ukuba uphuhlise inkqubo yokusebenza neqonga lobugcisa elinikwa yiAdobe
Isifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop (icandelo lesi-5)
Siqala ukugqiba esi sifundo sinomdla, apho sifunda ukusebenza kunye neAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop kunye.
Isifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop (icandelo lesi-4)
Siyaqhubeka nesifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop apho namhlanje siza kufunda ukwenza isenzo.
Isifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop (Inxalenye yesithathu).
Siyaqhubeka nesifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neFotohop, apho besilungiselela iqela lezithombe eziza kusebenza kuzo kwiFotohop,
Kwisifundo esedlule, saqala ukuhlela ifolda yeefoto esasisebenza ngazo nezo sicinga ukuba zifuna ukubanjwa ukuze ugqibelele
Ubungcali bomfanekiso kufuneka bazi iinkqubo zobuchwephesha ezibonelelwa yitekhnoloji, kunye nesoftware ukuze ikhuphisane emsebenzini wabo.
Iingcebiso ngokufota esitalatweni
Ukuba ufuna ukwazi ukuba nemifanekiso yakho yasezidolophini, kuya kufuneka ulandele iingcebiso zokufota esitratweni endikunika zona apha ngezantsi.
Isifundo: Ngokukhawuleza khetha i-typography ene-Illustrator
Namhlanje siza kwenza umsebenzi wokukhetha ifonti ngokukhawuleza. Ngale nto ndikuzisela yona, iTutorial: Khetha ityphayipu ngokukhawuleza nge-Illustrator.
UMelissa Ballesteros okanye indlela yokuzoba njengoBruce Timm kwaye ungafi uzama
Kwii-90s zakuqala, imboni yaseMelika yoopopayi yayisezidolophini. Kwakungekho ngaphantsi. Imikhono ...
Umzobi uBruno Wagner wayenomdla ngabazobi abanjengoBoris, uSiudmak, uHR Giger, uBrom kunye nomsebenzi wakhe uyaqhubeka ukukhuthazwa ngaba babhali.
Zonke izinto ezisisiseko ofuna ukuzazi malunga neRAW, kwisikhokelo sethu kwiRAW yaBaqalayo. Umahluko ngeJPEG, ukusebenza, njl.
Namhlanje sikuzisa iimvavanyo ezimbini zabaqulunqi ukuze uvavanye ezona zakhono zakho zemvakalelo: umbala kunye nokuqina. Ungakanani amanqaku onokuwafikelela?
Iincwadi zoyilo ziyindlela elungileyo yokufunda iikhonsepthi ezintsha, jonga ezinye iimbono, okanye ubonakalise isihloko. Nalu uluhlu olulungileyo.
Itshathi yeGantt isivumela ukuba sazi ngokubonakalayo amaxesha amisiweyo okugqiba iprojekthi. Funda apha ukuba ungayenza njani kwiiprojekthi zoyilo lwegraphic.
Ingxaki ephambili iza xa sizama ukungenisa ngaphakathi iziseko zedatha ezinkulu, kule meko umda wokulayisha oqwalaselweyo uza kudlala
Apha sihlaziya inkumbulo yakho ngenkcazo yokuba yintoni ikerning, yeyantoni, zeziphi iintlobo ezikhoyo kwaye ungayiguqula njani. Phucula uyilo lwakho!
Sabelana nawe ngothotho lweendlela zokuhlangabezana nexesha elibekiweyo kuyilo lwegraphic, ukuze usebenze ngcono kwaye noxinzelelo oluncinci.
Iimpawu zeLogos ezidumileyo
Ndikulethele uninzi lweempawu ezimangalisayo kunye ne-craziest logo onokuyifumana kwiwebhu. Makhe sijonge (kunye nokuhleka) kunye nabo.
Into onokuyenza ngeCinema 4D
ICinema 4D yinkqubo yoopopayi ye3D kunye nemizobo ephuculwe yinkampani kaMaxon. Ukuba unomdla kwimizobo eshukumayo, kuya kufuneka uyazi.
Isifundo: Iingcebiso ezili-9 zokudubula ebusika
Iinyanga zobusika zivelisa amathuba amahle okufota kwimisebenzi yethu yasebusika okanye yeKrisimesi.
Isifundo esisisiseko: amaphepha aphambili kwi-InDesign
Apha unokufumana isifundo esisisiseko ekusetyenzisweni kwamaphepha aphambili kwi-InDesign: ziyintoni, zenziwa njani, zisebenza njani ... Kubalulekile kuyilo.
Iingcamango ezilungileyo ze-7 zokwandisa ubuchule bakho
Ngaba unayo iBhloko yoMbhali eyoyikekayo, okanye iBhloko yoMyili? Ungathini ukuba ndikuxelele ukuba zikho iindlela zokuphucula ubuchule bakho?
Iindawo ezi-3 zokuthenga nokuthengisa iifoto
Malunga neli xesha lonyaka, ezi zinto zimbini zichaza iarhente yezithombe zeMicrostock zihambelana nomxholo kunye nezivumelwano ezilungileyo.
Yintoni ekufuneka ayile wonke umyili wemizobo malunga nokuprinta
Fumana umntu omnyama olungileyo, phrinta umfanekiso egazini ... Apha uya kufumana ulwazi olusisiseko malunga nokuprinta ekufuneka eyile umzobi ngamnye.
2 abaphathi bemisebenzi yasimahla eya kwenza ukuba usuku lwakho lube lula
Namhlanje siza kunazisa 2 abaphathi bomsebenzi wasimahla, izixhobo zomsebenzi ukufezekisa umbutho ongcono (owenzelwe wena neqela lakho).
Ukwenza uhlahlo-lwabiwo mali loyilo lwegraphic | Iingcebiso kunye nezixhobo
Fumana apha iingcebiso eziluncedo zokwazi ukuba ungalwenza njani uhlahlo-lwabiwo mali loyilo lwegraphic: imizekelo yemizobo, izixhobo zokubala ezikwi-Intanethi, iinkqubo zolawulo ...
Katarina Sokolova kunye nengcinga yedijithali
Katarina Sokolova - igcisa Ukrainian. Imisebenzi yakhe isekwe kwimidiya yedijithali, imixube yokufota, ukupeyinta kwidijithali kunye nezinto ze3D.
Isifundo seMzekeliso: Indlela yokwenza oopopayi nge-Illustrator
Namhlanje ndikuzisela esi sifundo silula kwaye siluncedo apho unokufunda ukwenza oopopayi beFlash, usebenzisa i-Illustrator kuphela.
Isifundo seFotohop: Ungasifaka njani isiphumo esifanayo kwiifoto ezininzi ezisebenza kwiibhetshi
Ngaba ungathanda ukukwazi ukwenza lula umsebenzi wokucwangciswa kwemifanekiso eyahlukileyo eya kuba ziintsuku okanye iiveki ukuya kwimizuzu embalwa okanye ngamanye amaxesha imizuzwana?
Uyigcina njani iWindowsPress yakho
Ngaba ukhathele kukugcina iWindowsPress yakho? Kuya kufuneka ubone isifundo esikulethela sona namhlanje. Ukwenza ikopi yakho akukaze kube lula.
Iindlela ezili-11 zokuchongwa kwesazisi sakho
Nika isazisi sakho sokudibana ngendlela yobungcali kunye nee-mockups ezili-11 esikulethela kule post kwaye wenze ukuba umxhasi wakho athi "ndiyayenza."
Isiphumo sokubhaliweyo okuhlekisayo (isifundo seAdobe Illustrator)
Fumana isiphumo sokubhaliweyo okuhlekisayo kuyilo lwakho olungacwangciswanga kunye neAdobe Illustrator ngokulandela inyathelo elilula nenyathelo esikulethela lona kwiiNdalo namhlanje.
USebastian Lester ngumbhali wokuchwetheza osebenze neenkampani eziphambili kwihlabathi esenza iileta zesiko kubo. Namhlanje yenye yezona zifunwa kakhulu.
Kule posi sikubonisa amaqhinga angama-8 angazukunceda usebenze ngokukhawuleza. Baza kukugcinela ixesha elininzi, yikholelwe okanye hayi. Jonga ezi!
Amakhadi eKrisimesi ali-10 okukukhuthaza
Amakhadi eKrisimesi anokuba sisixhobo esihle sokubonisa italente yakho. Kule posi siqulunqe i-10 ukukukhuthaza ngaphambi kokudala.
Iimpawu ezili-12 ezintle
Yonke imihla sibona iilogo ezingamakhulu, kodwa zeziphi onokuzenza ngokuzala ngengqondo? Nazi iilogo ezilishumi elinambini oza kuzikhumbula. Kwaye ukuba akunjalo, jonga.
5 iiFotohop tutorials ukwenza amaqhosha ewebhu
Inxalenye ebalulekileyo yoyilo lwephepha lewebhu yindlela apho abasebenzisi bangena kwaye bahambahamba kwisiza. Eyona iphambili, ewe, kukucofa kumaqhosha, ke kufuneka siqiniseke ukuba bayathandeka ngokubonakalayo
Iifoto ze5 Photoshop zeefotomontage
Inkqubo ye-photomontage ihlala isetyenziswa ngabayili bemizobo emininzi kunye nabathandi bokuhlela imifanekiso. Kuquka ukuthatha imifanekiso emininzi kwaye emva koko uyijoyine ngendlela yokuba kuboniswe umfanekiso omnye
Ukusetyenziswa ngobuchule kwesithuba esibi
Kule posi siqokelela imizekelo eli-13 elungileyo yokusebenzisa okrelekrele kwesithuba esibi kuyilo lwegraphic. Ukusikhuthaza kwaye sifunde ukubona.
5 Ileta yokukukhuthaza
I-logo yeCoca-Cola ikwazile ukuqhubeka ixesha, mhlawumbi kuba ileta. Kule posi sikulethela iileta ezi-5 zokukukhuthaza.
Phakathi kwezinto ezininzi ezinokufezekiswa kusetyenziswa i-Photoshop, iziphumo zombhalo zezona zidume kakhulu, kuba kunye nemifanekiso zihlala zibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na ilogo, isihloko okanye intengiso.
I-logo yinto ebalulekileyo kuyo nayiphi na inkampani, uphawu okanye uluntu, kuba ibonelela ngento ebonakalayo eya kuthi ivumele ukuba ichonge kwaye yahlule kwabanye.